Namuhla, thina sikanye nawe ukuthola ukuthi hlobo lwesistimu intela zingasebenzisa IP. Ngaphezu kwalokho, kungcono futhi baqonde lokho simo kangcono amabhizinisi egijima izindaba zabo. Ngokuvamile, umbuzo ibhizinisi ihlobene eduze izintela. Kuye umsebenzi wakho, it ziyozuza ukuqondanisa ethile. Kodwa umkhuba kuvela ukuthi omunye izinhlelo ngokuvamile ezisetshenziswa. Kungani? Yini? Konke lokhu ku. Angicabangi kulula khona ukukhetha. Futhi ushintsho ohlelweni eyodwa kuya kwenye, ngendlela efanayo njengoba ukubhaliswa komuntu njengoba usomabhizinisi kudinga izimo ezithile kanye nezinqubo. Nabo kudingeka bathole ukuthi. Mhlawumbe awukwazi ukukhetha ezinye System kanye intela ngokwakho!
Ngokuvamile, impikiswano izintela eRussia umncane kakhulu. Kufeza indima enkulu nganoma yimuphi umsebenzi. Futhi uma unquma ukuqala ibhizinisi lakho siqu, udinga ucabangisise ukuthi isistimu intela ingasetshenziswa PIS. It unikeza uhla lokukhethwa kukho. Ngaphambi bahlanganyele Umklamo ibhizinisi kumele kuchazwe ngokunembile nge umbuzo izintela. Kungenzeka futhi emva, kodwa uma bawunakekele kusengaphambili, siyokhululeka eziningi izinkinga esikhathini esizayo.
By the way, minyaka yonke eRussia uhlelo IP intela ukubekezelela ushintsho, futhi kwahambisana by ezinye izinketho ekhethekile. Ngakho, ngokwesibonelo, usanda kwethulwa patent. Lolu uhlelo olusha, okuyinto manje bayindlala kakhulu kwezinye izimo. Okuningi mayelana kamuva. Noma kunjalo, uyazi - kukhethwa simiso ukukhokhwa kwezintela kungokwakho. He is elula ngakho njengoba kubonakala cha. Cabanga ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo uhlelo ngamunye, bese kuphela isicelo imibhalo SP (ukubhalisa).
Njengoba sekushiwo, ngezimo kakhulu. Ucabanga ukuthi isistimu intela zingasebenzisa IP? Uma ngikhuluma iqiniso, lo mbuzo kunzima. Uma ungenalo bangene imininingwane ubuqili umbuzo, impendulo kungaba kalula futhi ngaphandle kwezinkinga - yimuphi.
Ngamanye amazwi, usomabhizinisi umuntu unelungelo eligcwele inkululeko yokuzikhethela kohlelo intela ngesikhathi kuvulwa ifemu. Noma ngasiphi isikhathi ngemuva ukubhalisa imibhalo efanele. Ukulinganiselwa khona, kodwa abawona ukuthi ebalulekile umkhuba. Ikakhulukazi uma ucabangela ukuthi manje njengoba osomabhizinisi abaningi zenziwa.
Ngakho onjani uhlelo intela zingasebenzisa IP? Muva nje, i uhlu lokukhethwa kukho liye lenyuka. Futhi manje olunye lwalezi nhlelo kungenziwa kukhethwe eRussia:
lula (USN, "intela Esenziwe Lula");
intela olulodwa imali kwabalelwa (UTII "vmenenka");
intela wezolimo olulodwa (okuthiwa UAT).
Njengoba sekushiwo, umgwaqo ngamunye kunezimo yabo kanye nobubi obuthile. Ezinye izinketho bakwenze kaningi. Kodwa yini bayeke? Iziphi izici ahlelwe izinhlobo yentela ngoba IP? Kwezinye izimo kungcono ukuqala ibhizinisi kwabanye isikimu? Yini Kuzothatha?
Asiqale nge simo esobala kakhulu futhi evamile. Into wukuthi jikelele uhlelo intela ngoba osomabhizinisi ngabanye - iyona isiqondiso main, okuyinto eyenzeka ngo-umkhuba. Njengoba ojwayelekile, uma ngesikhathi kuvulwa ibhizinisi musa ucacise yiluphi uhlelo ekhethekile, bese wena "okuzenzakalelayo", zonke izibalo nesimo uyokulwa OCHO. Ngomqondo onabile, kukho okuhle ngokuba imisebenzi kakhulu. Asikho isidingo waphinda lokumba butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela design, kanye bebheke umsebenzi wakho. Uhlelo Imininingwane Eqinisweni, engenayo imingcele. Okungukuthi, noma yimuphi usomabhizinisi uyakwazi ukuvula ibhizinisi lakhe siqu futhi sisasebenza leliqhinga ukusebenza ngaso sonke isikhathi.
Yiziphi izinzuzo nezingozi awavikelekile? Uma ucabanga, indlela uhlelo intela ungasebenzisa le-IP, bese wanquma ukuthatha ukuma ngokuvumelana jikelele, kufanele sinake izinto eziningi. Phakathi izinzuzo - ukuntuleka ikhanda seqoqo amaphepha adingekayo uma ivula ibhizinisi, futhi azikho imikhawulo uhlobo umsebenzi. Lokhu kuyamjabulisa eziningi.
lapha aqokomisa inani izintela. Ngokuvamile, i-osomabhizinisi ngabanye isethiwe likhulu kakhulu, futhi fixed - 13% emali. Ukuze izinhlangano ezisethelwe "strip" e-20% imali yakho engenayo.
Akuwona wonke inzuzo kusukela kulolu khetho. Uma une isakhiwo, izintela uyophinde ube yokuyikhokhela. Yebo, futhi kukhona i-VAT okuthiwa - lokukhokha, kumele ukukhiqiza izimpahla ithengiswe kanye nezinsizakalo. Okwamanje kusethelwe ku- "Ibhande" 18%. Okungukuthi, e OCHO kokuchitha zingaphezu kokwaneleyo. Ngezinye izikhathi ngisho nokulahlekelwa eyodwa, hhayi inzuzo.
Ngaphezu kwalokho, nokubika kufanele njalo incwadi ekhethekile irekhodi. osomabhizinisi ngamunye, abasebenzela OCHO nesikhathi ayisona idokhumenti efanele, kuyodingeka izinkinga ezinkulu. Ngakho, acabangele lesi sici nakho kudingekile uma unquma ukuthola ukuthi hlobo luni uhlelo intela zingasebenzisa IP, kanye kukho evumayo ikufanele wena.
By the way, i-VAT ngokuvamile ngumzuzu ocacisa izinto. OCHO ngokuvamile lisetshenziswa ukuhweba iimfesi futhi wholesale, kwezinye izimo kubalulekile ukubheka ekhethekile ifomu yentela. Ayoletha wena izinzuzo eziningi. Khumbula - uma ungenawo ucacise lapho obeka yimuphi ukwelashwa okukhethekile, lo "okuzenzakalelayo" kuthanda wena OCHO.
Okulandelayo inketho kuhle imali eningi - kuyinto isicelo okuthiwa "vmenenki". Ekusebenteni, eminyakeni yamuva akuvamile, kodwa kwenzeka. Lokhu - intela ekhethekile SP. Imisebenzi ukuthi kungaba kwenziwe ngaphansi kwalesi sikhwama, bhalisiwe e RF Tax Code. Ngakho, lolu hlobo sibalo iyatholakala hhayi zonke. Ngakho, unyaka ngamunye kufanele azibuze ukuthi kazi umsebenzi kuhilela kokuvula PIS UTII.
Izinzuzo samuntu abonakala ngokubona okubonakala ngeso lenyama. "Vmenenka" incike ibhizinisi lakho kanye nezakhi zalo. Amaphesenti esiphezulu inzuzo isethwe njengoba 15%. Okuningi kuxhomeke ngezinga zebhizinisi lakho. Hhayi ezifaneleke osomabhizinisi umuntu "ukubamba" ibhizinisi elikhulu.
Ngo-2016, izimo uyingane yokutholwa owawuthi UTII izinkokhelo angavunyelaniswa ezingeni lesifunda. Ngakho, eminye imisebenzi edinga% 7.5 kuphela inzuzo, futhi abanye cishe ngezikhathi 2 - 15%.
Nokho, kukhona ezinye amaphuzu ongathandeki UTII. Njengoba kuye kwashiwo, ithuba isebenze kule scheme nhlobo. Ngakho, uyohlale kufanele abheke umsebenzi wakho iye afakwe ohlwini okuhambisanayo Tax Code. Futhi nje uma, gcina "zokubuyela emuva" isinyathelo.
Futhi, uma ukwenza ibhizinisi izingxenye, le "vmenenka" ayikwazi ukusetshenziswa uma une esingaphansi 25% "kuqhubeka icala." Kuyinto lemithetho ngalesi sikhathi.
Uyini uhlelo intela ingasetshenziswa, SP? UTII asihambisani labo ukuvula into enkulu. Abanaso ilungelo ukuklama lokhu kuhluka osomabhizinisi ukuba njengoba abasebenzi abantu abangaphezu kuka-100. Kungenjalo, ungazama ukusebenza ohlelweni.
By the way, plus ezincane, okuyinto kwaba ukhohliwe - awukwazi usebenzise yemali e izibalo. Kodwa manje zithwale okunye ukwaziswa akhawunti kusadingeka. I wentela unelungelo lapha ukhetha ngokwakho. Ngokuvamile nje ukugcina izindleko namarisidi, ngezinye izikhathi kubangele ncwadi ezimali.
intela Patent for osomabhizinisi ngabanye baye ethulwe muva. Lokho sekuyinto ukuheha abantu abaningi ukuba ukuziqalela amabhizinisi abo. Vele abacabangi ukuthi lolu khetho ilungele. Yena, njengazo zonke ezinye ngeengaba, has ubuhle nobubi bayo.
Ngokwesibonelo, phakathi izinzuzo main ivelele exemption ephelele kusukela ukukhokhwa kwentela. Enough ukuthenga i-patent - futhi ungasebenza endaweni ethile ngaphandle izinhlawulo yemali. Konke kuyadingeka ukuze Esimeni esinjalo - incwadi ekhethekile ukugcinwa kwamarekhodi, okuyinto uzodinga esikhathini esizayo.
Okungukuthi, patent - kuyinto ukuthengwa loqobo ibhizinisi isiqondiso isikhathi esithile. Kuhle kakhulu Wabasaqalayo, lesi simiso - kwesikhathi okungenani ubuqiniso idokhumenti - 1 inyanga. Ungazama ngokwakho endabeni ethile, bese ukunweba patent noma cha ukushayela ibhizinisi ngaphezulu. Yemali egunyazwe Osomabhizinisi ngaphansi Esimeni esinjalo ekhululiwe. Sebenza isimiso 'ukuthenga futhi bakhohlwe ngempela. "
Nokho, kwamaphutha in the umgwaqo futhi eyanele. Okokuqala, kufanele ngokushesha kuqashelwe ukuthi imisebenzi labeka imingcele. Lokhu kusho ukuthi akubona bonke Unelungelo ukuthenga patent futhi usebenze kuzo. uhlu Esinembile engamiswanga Tax Code, futhi ngezinye izikhathi kukhona ukulinganiselwa ezindaweni ezithile. Badinga minyaka yonke ukuze kubongwe iziphathimandla zentela.
Futhi abakwazi ukuphoqelela inhlangano patent lapho abantu abangaphezu kuka-15. Futhi ngaleyo ndlela imali yakho ngonyaka akumele leqe eziyizigidi ezingu-60. Kungenjalo, patent uyomane ube amandla ngokomthetho.
Omunye ethile - izindleko idokhumenti. Ungishiya kusifunda ngasinye maqondana nemisebenzi ethize setha ngamunye. Lena kuhle noba alilihle. Kodwa iningi izici wale nkulumo alikho ukukhanya kakhulu.
Inketho olandelayo ukuthi kungaba - ke UAT. Le ntela ingekho kaningi kakhulu phakathi osomabhizinisi. Ngakho, okuningi ukugxila akusiyo zinkulu. Into wukuthi le ndlela akhethiwe kuphela uma kuziwa futhi bedayisa imikhiqizo yezolimo.
Kulokhu, uzodinga ukukhokhela umehluko ngesimo "engenayo imali". Ngaphezu kwakho konke, u-6% imali oyitholile. Ngomqondo onabile, unikezwa focus ewumngcingo kohlelo, ungakwazi ukuyisebenzisa. Ikakhulukazi uma esifanelana ibhizinisi lakho.
Kodwa sicela uqaphele - awukwazi ukusebenzisa leli lungelo, uma usayizi yenhlangano (inombolo sencekukazi) ziyoyidlula abantu 300. Uma Esimeni esinjalo, UAT akunjalo. Ngakho, empeleni le ndlela ngeke neze kubhekwe.
intela Esenziwe Lula
OCHO futhi sts - ezimbili zama-intela, okuyinto Uvame ukuzithola empilweni yangempela. Uma sifuna ukubonakalisa uhlelo ezivamile, thina esiphethweni, nanku lula okwamanje. Empeleni, kuba isimo esinjalo siyisivikelo bayindlala kakhulu okwamanje, osomabhizinisi.
Kungani? Into wukuthi umsebenzi "lula uhlelo intela" Kulula kakhulu futhi elula. Wena bayakhululwa ezinkolelweni akhawunti imali, kodwa ngokuvamile ulungise uma umholo zabo. Ngokuvamile amabhuku akhawunti okwanele. Ngesikhathi esifanayo kufanele akhokhe osomabhizinisi ezifana intela nje eyodwa - I-ukuqhutshwa. yokubika Lonyaka, inkokhelo, ngokuvamile kwenzeka ngo-30 Ephreli.
VAT ukhokhiswe ngaleso USN. Lokhu kuyinzuzo enkulu, okuyinto ejabulisa eziningi. Ngaphezu kwalokho, ubukhulu intela ezivamile isilungisiwe. It isethwe okwamanje, noma 6%, noma 15%. Okungukuthi, eqinisweni, njalo ngonyaka ne "lula uhlelo intela" une ukunikeza konke 6-15% imali yakho. Futhi-ke, ingabe yonke izinkokhelo eqondiswa Pension Fund (okungabanga bikho kuso umuntu ushwele). Ngakho, lesi simo ejabulisa eziningi. VAT USN, njengoba kuye kwashiwo, akukho. Bonke abanye "izindleko" kanye.
Phakathi amaphutha bungabonakala kuphela ukulinganiselwa umsebenzi futhi izici uhlelo inzuzo okusezingeni eliphezulu. Akuwona wonke umuntu unelungelo ukusebenzisa lula uhlelo intela - uhlu eqondile lwamagama liyabonakala endaweni yangakini. Phawula futhi - uma une inzuzo unyaka ruble ezingaphezu kuka-300 eziyinkulungwane, noma ngaphezu kwalokho, njengoba intela kuyodingeka bakhokhe 1% lemali wathola. kusimo abangelutho uma sicabanga ngazo zonke izinzuzo zemikhuba emihle "intela Esenziwe Lula". Intela SP (USN), lapho umuntu ukwenza izinkampani ezizimele - lesikahle!
Nokho, into yokugcina manje odinga ukukwazi - lawa imithetho ukubhalisa umuntu njengoba usomabhizinisi. Futhi udinga ukusebenzisa intela imibuso ekhethekile. Kuye kuthiwe ukuthi kwezinye izimo, lutho liyadingeka kini. Ukuze uvule IE, abakhona ehhovisi lentela:
isitatimende kuvulwa IP;
ifomu lesicelo ukusetshenziswa intela uhlelo ekhethekile (2 amakhophi);
Irisidi zombuso komsebenzi yokukhokha (ruble 800 2016).
Empeleni, yilokho kuphela. Imibhalo for IP ngomumo, ungawasebenzisa bese uthola isitifiketi sokubhalisa. Kulokhu, uqaphele ukuthi uma ungenawo ucacise iyiphi indlela ekhethekile intela, inani izokhetheka. "Intela Esenziwe Lula" kumele isebenze ezinsukwini ezingama-30 kusukela ngosuku lokubhalisa (ukusebenzisa uhlelo ngonyaka lamanje) noma kuze December 31, udinga ukufaka isicelo kube unyaka ozayo. UTII ekhishwe zingakapheli izinsuku 5 emva kokuqala umsebenzi wakho, i-Kusebenza umthetho ofanayo kwezinye izinhlelo. Ayikho into enzima ngakho. Kungcono nje ukukhetha yokubika esimweni.
Manje ngiyaqonda ukuthi isistimu intela zingasebenzisa IP. Ngokuvamile, uma egijima eyodwa (noma neqenjana), futhi awukhathali ukukhokhelwa VAT, kungcono ukuba ukhethe uhlelo intela lula. Lena ukhetho best esisindisa wentela kusukela kokuhlupheka futhi wamaphepha.
Intela usomabhizinisi: Yiziphi izinketho